Hargaisa iyo ilbaxnimada Wargaisyada (Maqaal) – Radio Daljir
Abriil 8, 2019 1:35 g 0
Horumarka Aadanaha ee qoraalka iyo akhriska, wararka la isku gudbiyo iyo guud ahaan warbaahinta waxaa ugu horraysay uguna facweyn ta xaashiyaha lagu qoro (Newspaper صحف).
Wargeysyadaasi ilaa hadda si weyn baa Dunida loo adeegsadaa lagamana yaabo in ay baaba’aan waayo waa wax qof kasta heli karo, inkastoo ay tartan adag kula jiraan warbaahinta la dhagaysto, ta la daawado iyo tan cariga ah ee Internet-ka oo qof walba taleefoonkiisa gacanta uu waxoo dhan ka heli karo.
Markaan dalkeena Soomaaliya usoo noqdo, magaalada Hargeysa waa meesha kaliya oo wargeysyadu si weyn uga soo baxaan maalin walba iyagoo tira badan. Waxa ugu wacana waa waxaa kuyar idaacaadaha aadka ugu badan deegaanada kale ee dalka.
Wargeysyadu waxy kordhiyaan oo dhiirrigaliyaan in dadku wax akhriyo, haduu akhrisku batana waxaa kordhaya qoraalka.
Hargeysa markaad joogtid waxaad dareemaysaa cimilo akhris-qoraal, waana ilbaxnomo ay Soomaalida kale dheeryihiin reer Soomaalilaan, waxaana filayaa waa sababta ay Soomaalida kale uga badiyaan Afsoomaaliga ugana qorayaal badan yihiin.
Hadal iyo dhammaanti, waxaan kula talin lahaa deegaanada kale ee dalka oo ay kujirto caasimadda Muqdisho in layareeyo idaacadahaan trada kabatay oo lagu badalo wargeysyo, si dadku wax u akhriyo waxna uqoro fadhi-kudirirkuna uyaraado.
Cabdulqaadir M. Nuur.
Soomaaliya iyo Talyaaniga oo Kawada Hadlay Iskaashi Ciidamada Iyo Amniga.